ဘင်္ဂလားဒေရှ် မှာ ပလီ ကို မိုးကြိုးပစ် ၁၃ ဦး သေဆုံး | Freedom News Group
ဘင်္ဂလားဒေရှ် မှာ ပလီ ကို မိုးကြိုးပစ် ၁၃ ဦး သေဆုံး
by FNG on August 11, 2012	ဘင်္ဂလား ဒေရှ် နိုင်ငံ အရှေ့ မြောက် ပိုင်း ရှိ ဝေးလံ ခေါင်းသီ သော ကျေး ရွာ တစ်ခု မှ ဗလီ တစ်
ခု အား မိုးကြိုး ပြစ် ရာ ၁၃ ဦးသေဆုံး သွား ပြီး ၊ ၂၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိသည်။ မွတ်ဆလင် ဘာသာ ၀င် တို့အထွတ် အမြတ် ထား ရာ ရာမာဒန် ဥပုတ် ကာ လ တွင် သောကြာ
နေ့ဉ် ဆုတောင်းမှု ပြု လုပ် နေ စဉ် လျှပ် နွယ် ၊ လျှပ် ပန်း များ မိုးလုံး ပြည့် ဗျူဟာဆင် ပြီး နောက်
တွင် လူ လေး ဆယ် နီး ပါ စုဝေး ဆု တောင်း နေသည့် ဆွာရာဝတီ ရွာ မှ ဗလီ ကို ပြစ် ချလိုက် ခြင်း
ဘင်္ဂလားဒေရှ် နိုင်ငံ တွင် ယခု ရက် ပိုင်း အတွင်း မိုးသည်း ထန် စွာ ရွာ သွန်း ပြီး ရေ ကြီး မြေပြိုမှု
များ ဖြစ်ရာ လူ ပေါင်း ရာ နှင့် ချီ သေဆုံး မှု များ ရှိခဲ့ သည်။
လှေ ကို သာ အား ထား ပြီး ခရီးသွား လာရသည့် ထိုရွာ တွင် ရာမဒန် ဥပုတ် ကာလ အတွက် မိုးကြိုး
ပြစ်ခံရသည့် ဗလီ ငယ် ကို ရွာ သား များ က တည် ဆောက် ထား ခြင်း ဖြစ်သည်။
Bangladesh, Lightning Strike, Mosque,
13 dead as lightning strikes Bangladesh mosque (dailystar.com.lb)
13 die as lightning strikes Bangladesh mosque (newsinfo.inquirer.net)
Lightning strike kills 13 and wounds 20 in Bangladesh (theextinctionprotocol.wordpress.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ဒီတစ်ပတ် စားသောက် ဖွယ်ရာ | Beef Tenderloin
အီရန် ငလျှင် ဒဏ် လူ ၃၀၀ ကျော် သေဆုံး ၊ ၂၀၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ Update →
August 14, 2012	့honey #
al lar calling them .talent people with them?
better.go to hell.
August 13, 2012	Mg Thwin Mg Gyi #
August 12, 2012	moe maung maung #
August 12, 2012	asdfjkl; #
kg tar hehe
August 11, 2012	kokoarrow #
သတင်း uptodate, I LIKE NEWS.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	8,718,152 hits
LOOK: Which Is The 'Real' Dalai Lama, And Which Is Illusion? huff.to/1bNPvTs via @HuffPostRelig 1 day ago